Shiinaha KF900A La-qaadan Karo Sirdoonka IEC61850 IEDs Falanqeeyaha Imtixaanka iyo alaableyda | Kingsine
Imtixaanka Falanqaynta KF900A Sirdoonka La Qaadan Karo IEC61850 IEDs
Soo saarida qalab tijaabo oo dhameystiran oo ku saleysan baaritaanka caqliga hoose, inta badan shaqadu waa baaritaanka gudbinta ilaalinta, qiimeynta qiimaha tusaalooyinka, falanqaynta faylka SCD / isbarbardhiga iyo adeegga MMS. Ku habboon ogaanshaha iyo tijaabinta qalabka IED sida gudbinta caqli-celinta ee caqliga, cabbiraadda iyo aaladda xakamaynta, unugyada la midoobo iyo terminal caaqil ah. Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa hubinta calaamadaha lakabka xakamaynta substation.
Miisaanka khafiifka ah: <2.75kg
Hawlgal taabasho buuxa
Laydh lithium ah oo lagu rakibay quwad koronto, oo leh cabir yar, miisaan fudud, hawlgal shaashad taabasho buuxa oo LCD ah, shaqooyin tijaabo oo xoog leh, iwm, si loo buuxiyo shuruudaha nidaamka wadajirka ah ee tijaabada, rakibaadda iyo hawlgalinta, hawlgalka iyo dayactirka iyo tababarka xirfada. substation caaqil.
KF900A waa qeexitaan cusub oo tijaabiyaha ilaaliyaha gudbinta dhijitaalka ah ee indhaha, sidoo kale u keenaya waayo-aragnimo hawlgal cusub oo adeegsadayaasha ah.
Tijaabiyaha ugu yar ee gudbinta dhijitaalka ah, 10.4 inji shaashadda sare ee LCD capacitive-ga ah, mashiinka oo dhan hawlgalka shaashadda taabashada oo dhan;
Shaqada tijaabada gudbinta ee ilaalinta guud, Iyadoo si buuxda u shaqeyneysa imtixaanka gacanta, isdabajooga gobolka, Harmonic, tijaabada dib u soo celinta, Khadka kala duwanaanshaha, Fogaanta, Masaafada u dhaxeysa, Xad dhaafka ah, Soosaaraha xiga Kaydinta tijaabada korontada, kala duwanaanshaha Busbar, Imtixaanka Soo noqnoqda, baaritaanka DVD / Df, iwm.
Iyada oo la adeegsanayo adeegga adeegga isgaarsiinta MMS, Qiimaynta muunad-kormeerka-waqtiga dhabta ah, soo-gelinta / soosaarida laba-geesoodka ah, dhacdo digniin ah oo ku saabsan gudbinta ilaalinta iyo qalabka cabbirka & xakamaynta. Taageerada gudbinta gudbinta ilaalinta akhriska khadka tooska ah ee internetka, wax ka beddel iyo dejinta beddelka aagga. Taageerada saxanka gudbinta awood u siiya / joojiso, shid / dami.
Iyada oo la adeegsanayo shaqada tijaabada ah ee otomaatiga ah ee wareegga wareegga wareegga ah, Adoo diraya SV iyo fariin GOOSE, iyo helitaanka jawaab celinta MMS ee sameysay loop xiran, xaqiijinta tijaabada otomaatiga ah ee boosteejooyinka dalwaddii;
Waxay taageertaa hubinta joogteynta feylasha qalabka IED. Ka hel tusaalaha aaladda IED khadka tooska ah ee loo maro MMS, isbarbar dhig ku samee faylka nooca SCD ee maxalliga ah, oo hel natiijada iswaafajinta ee qaabka;
Iyada oo adeegsanaysa tijaabada lakabka xakamaynta asaasiga iyo xakamaynta, soo dejinta faylka SCD, waxay u ekeysiin kartaa ilaalinta, cabirka & qalabka xakamaynta si ay u dirto calaamadda cabbirka fog, signaalka kontaroolada fog iyo astaamaha kale, marin u hesho shabakadda lakabka xakamaynta saldhigga iyada oo loo marayo hab maamuuska MMS, la xiriir asalka iyo aaladda fog, ku habboon oo dhakhso u kicinaysa dhammaan dhacdooyinka qaylo-dhaanta, waxay beddeleysaa xaaladda beddelka ON ama OFF, iyo hadda, danab, iyo qiyamka awoodda si loo gaaro tijaabo-ilaa-dhibic asalka kormeerka ama saldhigga sayidka;
Taageerida soo dejinta miis dhibic Excel, hel helitaanka qaabeynta khariidaynta kanaalka calaamadda cabbirka fog iyo aaladda kontoroolka fog iyadoo loo marayo faylka SCD, si otomaatig ah u soo saar miiska barta calaamadaha saldhigga, oo si toos ah ugu gudbiya calaamadda cabbirka fog iyo aaladda kontoroolka fog iyadoo la raacayo lambar dhibic;
Iyadoo la adeegsanayo SV, GOOS hawlqabadka kormeerka fariinta. Soo bandhigida waqtiga dhabta ah ee saamiga qiimaha saamiga SV, wajiga, inta jeer, mowjadaha, dulinka iyo koodhka isha farriinta, muujinta waqtiga-dhabta ah GOOSE heerka terminal dalwaddii iyo koodhka ilaha farriinta, duub tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo tijaabinta habka gudbinta farriinta GOOSE;
Waxay taageertaa dib u dhaca gudbinta, sharafta fariinta SV, saxnaanta soo saarida SV, iskudarka firidhida unugga waqtiga iyo cabirka saxnaanta waqtiga;
Waxay taageertaa muujinta garaafka ee faylasha SCD, waxay si garaaf ahaan ah u muujineysaa isku xirnaanta qalabka IED iyo isku xirnaanta siddooyin wareegsan; leh isbarbar dhigga faylka SCD, waxayna soo saartaa warbixinno isbarbardhig ah;
Raajiyaha waqtiga-dhabta ah marka la barbar dhigo faylka SCD si loo gaaro hubinta joogteynta feylka SCD;
Rikoodh taageeraha iyo faylka PCAP ee falanqaynta khadka-ka-baxsan, oo leh hawl-qabad fariin PCAP ah.
Taageerida howlaha IRIG-B ee dirista, waxaa loo isticmaali karaa inay noqoto isha waqtiga, iyadoo 6 kanaal ay gooni u yihiin calaamadda fiber IRIG-B.
Taageerada waxqabadka hubinta Polarity, taageerada isticmaalka habka DC si loo hubiyo kala-baxa ilaalinta / cabbirka xudunta elektromagnetic-ka iyo qalabka elektaroonigga ah;
Iyada oo la adeegsanayo cabirka korontada ee indhaha, shaqada ka-ogaanshaha wejiga ka baxsan, dhismaha batroolka lithium-ka lagu dhex dhisay, waqtiga shaqadu waa in ka badan 8 saacadood oo isdaba joog ah.
Dekedda Fiber 8 lammaane, dekedda nooca LC, dhererkeeda hirarka 1310nmMid ka mid ah dekedaha indhaha waa mid u heellan 1000m module optical, oo ku habboon shabakadaha 1000M.
Fiber dekedda serial 8, dekedda nooca ST, dhererka-mowjadda 850nm6 dirista, 2 qaadashada (Waxaa loo isticmaali karaa FT3 ama IRIG-B)
Dekedda Ethernet 1，100Base-TX ， RJ45
Dekedda GPS 1 kanaal, qaataha signalada GPS gudaha
Dekedda aqbasho Analog (Ikhtiyaar) 4 ama 8 lammaane, 18 bit AD, heerka muunad qaadista 40kHz, kala duwanaanta aqbashada 0-250VAC
Xidhiidhka adag ee binary 1 Lammaane, La-qabsasho la-qabsi la-qabsi ah ama xiriir suuragal ah (30 ~ 250V), waqtiga jawaabta ≤500μs
Soo-saarista binary ee adag 1 lammaane, Nooca Furan-aruurinta, xayiraadda awoodda in ka badan 250V, 0.3A (DC), waqtiga jawaabta μ 100μs
Cabir saxnaanta Danab iyo khalad saxnaanta cabirka hadda ≤0.05%Saxnaanta Joogtada ayaa ka fiican 0.001Hz oo u dhexeysa 15 ~ 1000HzKhalad saxnaanta cabirka wejiga -0.01 °
diraya Sugnaansho danab iyo qalad saxnaanta cabirka hadda ≤0.05%Saxnaanta Joogtada ayaa ka fiican 0.001Hz inta u dhexeysa 10 ~ 1000HzKhalad saxnaanta soosaarka wajiga -0.01 °
Fariinta wax soo saarka SV ± ns 80n
Dib u dhaca wareejinta wareejinta silsiladda Fiber Ns100ns
SV waafajinta Cilad waqti ah oo udhaxeysa dekedda Fiber <1μs
Koronto Baakid batari lithium oo leh awood ballaaran oo gudaha ahAdaptive Power put Gelitaanka 220VAC / 50Hz ， -20% ~ + 20%Soosaarka DC 15V ± 10%
Muujin 10.4 inji shaashad LCD karti-sare leh ah (shaashad taabasho)
Cabir 320mm × 250mm × 100mm (L × W × H)
Hore: K2063i Deji Tijaabada Universal Relay
Xiga: KF86 Set Imtixaanka Gawaarida Sirdoonka
KF920 Set Imtixaanka Sirdoonka Sirdoonka
Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Tijaabada gudbinta, Dhammaan Alaabooyinka